ဒေါသသိပ်မထွက်နဲ့ ဝိတ်တက်လာမယ်နော်... သတိထား! - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » စိတ်ကျန်းမာရေး » ဒေါသသိပ်မထွက်နဲ့ ဝိတ်တက်လာမယ်နော်… သတိထား!
စိတ်တိုလိုက်တာနော်။ ဒေါသတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင် စိတ်လေးကိုလျှော့ပါလို့ ပြောပါရစေ။ အကြောင်းကတော့ Helloဆရာဝန်ရဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးကို ဒေါသကြောင့် အလှပျက်မှာစိုးလို့ပါနော်။ ဒေါသထွက်စိတ်ဆိုးလို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွက်ပါ သိပ်တော့ကောင်းလှတာမရှိပါဘူး။
ဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာက တစ်ခါတလေမှာ ရှောင်လွှဲဖို့တော်တေ်ာလေးခက်သားနော်။ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေတွေကလည်း အဖုံဖုံကိုး။ ဒါပမယ့် ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ စိတ်လျှော့ပါလို့ ပြောပါရစေနော်။ အခုနောက်ပိုင်း ပြောင်းလဲလာတဲ့ လူနေမှုပုံစံ ကြောင့် အဝလွန်တာတွေက အဖြစ်များပါတယ်။ အားအသောက်နဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကြောင့် ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကို ထိန်းသိမ်းဖို့ခက်ရတဲ့ ကြားထဲကမှ ဒေါသကြောင့် ထပ်ဝလာတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့နော်။
လေ့လာချက်တွေအရကတော့ ဒေါသထွက်တာက အစားစားချင်စိတ်ကိုပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခဏခဏဒေါသထွက်တာက ဝလာစေဖို့ အစပျိုးတဲ့ အကြောင်းအရင်းပါ။ ဒေါသထွက်တာကြောင့် အမျိုးသားတွေမှာ လက်မောင်း နဲ့ ခြေထောက်ကြွက်သားတွေ လျော့ရဲလာတာ၊ ဗိုက်မှာ အဆီတက်လာတာ၊ မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်လာတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ လေဒီလေးတွေမှာတော့ ဒေါသကြောင့် ဗိုက်အဆီတက်တာ၊ အသားအရေကြမ်းလာတာ၊ ဝက်ခြံတွေဖြစ်တာ၊ ခါးနဲ့နောက်ကျောမှာ အဆီတက်တာတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒေါသကြောင့် တက်လာတဲ့ အဆီတွေက တစ်ခုမကတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ပေါင်းစပ်နေတာကြောင့် ပြန်ကျစေဖို့ဆိုရင် အစားအသောက်ဂရုစိုက်တာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတွေကို သေချာလေးလုပ်ပေးပြီး ပြန်ချဖို့လိုပါမယ်။ နောက်မွေထားလို့ မရတဲ့တစ်ချက်က စိတ်လေးကိုအေးချမ်းနေစေဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပါ။
ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာလို့ ချနေပေမယ့် နေ့တိုင်းလိုလို ဒေါသဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်း မဟုတ်သေးပါဘူ။ ဒါကြောင့် နေ့တိုင်းမှာ စိတ်ကလေးအေးချမ်းနေစေဖို့လည်း ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာမှာ ဒါသထွက်စရာတွေကြုံခဲ့ရင်တောင် အကာင်းဆုံးကျော်လွှားဖို့ဆိုရင်တော့ ဒီအချက်လေးတွေကို လိုက်နာဖို့လိုပါမယ်။
တကယ်တော့ ဒေါသထွက်တာက ဝိတ်တက်စေတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပါထိခိုက်စေတဲ့ အခက်တွေအများကြီးပါ။ ဒေါသခဏခဏထွက်မယ်ဆိုရင် ရေရှည်မှာ
လေဖြတ်တာနဲ့ အခြားနာတာရှည်ရောဂါတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကဲ….. လုပ်သမျှ Diet တွေ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ အလကားမဖြစ်စေဘဲ သွယ်လျလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးရစေဖို့ ဒေါသမထွက်နဲ့နော်…………….
ဝိတ်ချတဲ့အခါ အထိမိဆုံး အစားအသောက်အတွဲအစပ် (၁၀) မျိုး
ဝိတ်တုံးမပြီး ကိုယ်ပေါ်က အဆီတွေ လောင်ကျွမ်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ။
ကိုယ်က အမြွာမွေးနိုင်ချေများတဲ့ လူတစ်ယောက်လား။
ကျန်းမာရေးနဲ့ အာဟာရ, ဆေးပညာနောက်ဆုံးသတင်းများ, ကျန်းမာရေးစင်တာ
အစာ စောစောစားတာ ဝိတ်ချရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်